Hlola iMount Fuji, Japan - World Tourism Portal
Hlola iMount Fuji, eJapan
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yaseMt. Fuji
Bukela ividiyo emayelana neMt. Fuji
Hlola iMount Fuji noma iFuji-san, okungukuthi Japan'intaba ephakeme kakhulu nendawo okugxilwe kuyo yiFuji-Hakone-Izu National Park. Kubonakala kusuka Tokyo ngosuku olucacile, intaba itholakala entshonalanga yeTokyo esiqhingini esikhulu saseHonshu, ehlukanisa umngcele phakathi kwezigodi zaseYamanashi naseShizuoka.
INtaba iFuji (Fujisan), etholakala kwi-Honshū, iyintaba-mlilo ephakeme kunazo zonke eJapan e-3,776.24 m (12,389 ft), esiphakeme kunazo zonke se-2nd -siphakeme sesiqhingi (intaba-mlilo) e-Asia, kanye nesiqongo esiphakeme kunazo zonke sesiqhingi emhlabeni. Kuyacwilisa stratovolcano okugcine ukuqhuma ku-1707-1708. INtaba iFuji ilele kumakhilomitha angama-100 (60 mi) eningizimu-ntshonalanga yeTokyo, futhi ibonakala lapho ngosuku olucwathile. Isigaxa esiyingqayizivele se-Mount Fuji, esiboshwe ngeqhwa izinyanga ezingaba ngu-5 ngonyaka, sivame ukusetshenziswa njengophawu lweJapan futhi sikhonjiswa kaningi kubuciko bezithombe, kanye nokuhanjelwa ngababukeli kanye nabagibela izintaba.
INtaba iFuji ingenye 'Yezintaba Ezingcwele Ezintathu' zaseJapanSanreizan) kanye ne-Mount Tate ne-Mount Haku. Futhi iyiNdawo Ekhethekile Yobucwebecwebe futhi ingenye yezindawo zomlando zaseJapan. Kungezwe kuhlu Lwamagugu Womhlaba njengeSayithi Lamasiko ngoJuni 22, 2013. Ngokusho kwe-UNESCO, iMount Fuji "ibisigqugquzela abaculi nezimbongi futhi ibiyinto yokuhambahamba amakhulu eminyaka". I-UNESCO ibona amasayithi we-25 anentshisekelo yamasiko ngaphakathi kwendawo yaseMount Fuji. Lezi zindawo ze-25 zibandakanya intaba kanye ne-shinto shinto, iFujisan Hongū, iSengen Taisha, kanye neBuddhist Taisekiji Head Temple eyasungulwa e1290, kamuva engafi ngumculi waseJapan ukiyo-e uKatsushika Hokusai.
Intaba ecishe ilingane ngokuphelele nentaba-mlilo, intaba iwuphawu lukazwelonke olusondele kakhulu olungenakufezeka emisebenzini yobuciko engenakubalwa, kufaka phakathi iHokusai's Ukubukwa kwe-36 kweMt. Fuji.
Ngaphambi kokuba izivakashi ziye ezingeni le-5th eMt Fuji, kufanele zivakashele ithempeli laseMurayama Sengen Jinja ngoba abantu baseJapan bakholelwa ukuthi iMt Fuji iyintaba engcwele exhunywe ngokuqinile noNkulunkulu. Bakholelwa ekutheni abantu esikhathini esedlule beza ukuzokhuleka eMurayama Sengen Jinja ukuze babe nezinto ezinhle empilweni. Leli thempeli lidala kakhulu. Yakhiwa eminyakeni eyi-1000 edlule. Abanye abantu bathanda ukubona izimbali zeCherry zingasetshenziswa engadini yethempeli. Ithempeli likaFuji Gen lisendaweni engaphansi kweMt Fuji futhi abantu abaningi abayivakashela bazizwa belondekile. Abavakashi bavame ukuthatha uhambo lokuya kuwo wonke amachibi amahlanu aseduze kwethempeli.
Isikhathi sokukhuphuka esisemthethweni sihlala izinyanga ezimbili kuphela, kusukela ngoJulayi kuya ku-Agasti. Ngisho nangalezi zinyanga, lapho iTokyo ivame ukubhukuda ekushiseni kwe-40 ° C, amazinga okushisa aphezulu angaphansi aqandiswe ebusuku futhi abakhwela izambatho kufanele bagqoke ngokwanele.
Ukukhuphuka ngaphandle kwesizini esemthethweni kuyingozi enkulu ngaphandle kokuhlangenwe nakho kokunyuka kwe-alpine nemishini. Cishe zonke izikhungo zivaliwe ngesikhathi sokuphumula. Isimo sezulu, esingalindeleki noma isiphi isikhathi sonyaka, sibi kakhulu ebusika (amazinga okushisa angaphansi kuka--40 ° C abikwe phezulu) futhi kunamacala abantu abashaywa intaba benyuka imimoya enamandla. Yonke imigwaqo eya esiteshini i5th ivaliwe ngaphandle kwesizini ngakho-ke uzoba nokuhamba ibanga elide. Kepha uma uphikelela, ukhuthaza kakhulu ukuthi okungenani ufake ifomu lokukhuphuka namaphoyisa aseYoshida.
Ngenhlanhla, kunezindlela ezimbalwa ongakhetha kuzo kulabo abangakulungele ukukhuphuka noma abangathanda ukusondela “entabeni” ngesikhathi esingesiso. Imizila engezansi kwentaba incane kakhulu, futhi ifanela kakhulu ukuhamba kwantambama nganoma yisiphi isikhathi sonyaka. Amachibi Amahlanu AseFuji aseduze (Fuji-goko) inezinto eziningi eziseduzane nentaba, kanti iHakone nayo inikezela ukubukwa okumangazayo. Egatsheni lezinto ezingagxili endalweni, idolobha laseFujiyoshida, eliqukethe iningi lentaba, lisekhaya naseFuji-Q Highland, ipaki lokuzijabulisa elihamba phambili.
Yini ukubona. Izindawo zokudlela ezihamba phambili ezihamba phambili eMount Fuji, eJapan.
Indawo: Gotemba / Hakone
Indawo: Kawaguchiko / Yamanakako / Saiko / Shojiko kanye noMotosuko (owaziwa ngokuthi amachibi we-fuji 5 noma iFuji-go-ko)
Into okufanele bayenze Mt. Yebo, uFuji uwukukhuphuka. Njengoba amaJapane esitsho, indoda ehlakaniphile igibela kanye uFuji, nesiwula kabili, kepha ukuhlakanipha kwangempela kwalesi sisho kuvame ukufundwa kanzima. Abasubathi baqede ukukhuphuka kungakapheli amahora amabili futhi kunomjaho owodwa oya phezulu, kodwa kubantu abaningi kuthatha amahora we-4 ukuya kuma-8 ngejubane lokuhamba (ngokuya ngejubane lakho), kanye nokusuka kwenye i-2 kuya ku-4. Ukukhuphuka ubusuku bonke ukuze ufike phezulu ekuphumeni kwelanga (go-raiko) iyinto yendabuko kakhulu, kepha cishe uzobe usuhamba ngomugqa ohamba kancane wokugibela izigaba zokugcina zenyuka. Cabanga ukuqala ekuseni kakhulu ukufika engqungqutheleni yokushona kwelanga okuhle kakhulu, nengxenyana encane yezixuku ezokuphelezela. Ngemuva kwalokho, ungazama ukulala endlini yezintaba (bheka ngezansi) bese ubamba ukuphuma kwelanga uma uthanda; ezimbili ngomzamo munye.
Izingubo ezisezingeni eliphansi zokugibela iFuji kungaba:
izicathulo eziqinile (amabhuzu okuhamba izintaba uma kungenzeka)
izingubo zokufakazelwa yimvula
Musa ukugqoka izikhindi. Umbono omubi kangako.
Amagilavu ​​kanye nezingubo ezifudumele, ezingaphansi nazo kunconywa kakhulu. Okunye okudingayo okudingayo yilokhu:
i-flashlight kanye namabhethri okusiza (uma ukhwela ebusuku)
izibuko zesibuko kanye ne-sunscreen (ezodingeka kakhulu ngesikhathi sokwehla noma ukhuphuka ebusuku)
Izinhlamvu zemali zaseJapan ze-100-yen, njengoba amathoyilethi asebenzisa ukusetshenziswa ngakunye futhi abiza i-¥ 100 noma ¥ 200
Izikhwama zepulasitiki zokuthwala udoti nokugcina kude nendawo enamanzi.
iponcho uma kwenzeka kunemvula (qaphela: ama-ponchos amaningi ashibhile athengisiwe nxazonke Tokyo kuzodwengula ukusetshenziswa okungatheni)
Ikhamera yakho yokubukwa okumangazayo!
Futhi ulethe okungenani i-1 ilitha lamanzi umuntu ngamunye, okungcono i-2. Ukudla okulula okunamandla (iCalorie Mate) kanye nemali yokugibela enkulu (amabhola elayisi nokunye) nakho kuzosiza kakhulu.
Indlela yeKawaguchiko (Fujiyoshida)
Indawo yokuqala ethandwa kakhulu yi-Kawaguchiko 5th Station (Kawaguchiko Go-gōme, I-2305m), ekunikeza ithuba lokugcina lokuthenga ezitolo (kwiphrimiyamu) ngaphambi kokuphuma. Ukwelulwa kokuqala ngokusebenzisa izimbali ezigeleza kahle kumnandi ngokwanele, kepha ubuningi bendawo kuyisiqubulo esingapheli futhi esinganqobeki: indawo enentaba-mlilo iqukethe idwala elibomvu elihlanganisiwe ngosayizi ohlukahlukene kusuka othulini kuya edwaleni, ngomkhondo osuka kwesokunxele futhi ongapheli, futhi Hike nje iya ngokuqina futhi iqonde njengoba uthuthuka. Ukukhuphuka kwamatshe kwangempela akudingeki, kepha uzofisa ukusebenzisa izandla zakho ezindaweni ezithile ukwesekwa - ulethe amagilavu. (Uma ubakhohlwa, angathengwa ezitolo esiteshini sesihlanu se-¥ 200.)
Ukuhamba ngomkhondo kuphawulwe kahle (ngisho nasebusuku) futhi ngesizini uzokuthola kunzima ukulahleka, njengoba uhambo luphelile minyaka yonke ngabantu be300,000 futhi kungahle kube nezindawo zokugcwala kwabantu kwezinye izindawo ezinobungozi. Kodwa-ke, ngenxa yengozi yokudilika komhlaba ungenzi qhubeka ngale kwendlela; ukubonakala nakho kungancishiswa ngokushesha kube yi-zero-zero uma amafu engena.
Kanye phezulu, uzodlula ngaphansi kokuncane torii isango futhi uhlangane neqembu lezindawo zokuthengisa ezithengisa iziphuzo nesikhumbuzo; lokhu kuba yiJapan, uzothola nemishini yokuthengisa phezulu esiqongweni seNtaba iFuji. Yebo, lokhu kufana ne-anticlimactic njengoba kuzwakala, kodwa nganoma iyiphi inhlanhla ukubona ukuphuma kwelanga ngaphezulu kwamafu kuyokwenzela lokho. Ungabuye ubheke emgodini omude omude enkabeni yentaba. Ngokweqiniso, leli akuyona iphuzu eliphakeme kakhulu lentaba; lelohlonipho liya esiteshini se-meteorological ngakolunye uhlangothi lwe-crater, imizuzu eyengeziwe ye-30 isuka kude. Ngenkathi abanye bengakubheka njengengafanele ngempela inkathazo, isazi sezempilo sizokutshela ukuthi uma ungami endaweni ephezulu kakhulu, awukaze wabizelwa ngempela, ngakho-ke ukukhetha kungokwakho. Ukujikeleza okugcwele kwe-crater kuthatha cishe ihora.
Kunendlela ehlukile yokwehla intaba ibuyela eKawaguchiko; qiniseka ukuthi uthatha okufanele! Ungazami ukwehlela intaba; ukweqa phansi akumnandi, kuyindlela ende eya esibhedlela esiseduze, futhi awufuni ukuthola ukuthi kubiza malini indiza enophephela emhlane eJapan.
Le ndlela ende kakhulu futhi ifinyeleleka kunazo zonke esiteshini sesihlanu, neGotemba 5th Station (Gotemba Go-gōme) etholakala kumamitha we-1440, cishe amamitha we-900 aphansi kuneKawaguchiko.
Kunemizila ehlukile yokwenyuka nokwenyuka, ezothatha i-7 ukuya kwi-10 ne-1.5 kuya emahoreni we-3 ngokufanele. Indlela imakwe ngokucacile ngezimpawu, ngakho-ke ukukhwela ebusuku (ngethoshi) kungenzeka. Ukuphepha kwakho, ukuhamba ngendlela ye-bulldozer, ewela indlela yabahamba ngezinyawo kaningana, akuvunyelwe. Ukukhuphuka kusuka ku-5th kuya esiteshini se-6th kungaphezulu kwensimu enkulu yomlotha, eyakheke ngesikhathi sokuqhuma kwe-1707 kwakamuva. Izindawo zasentabeni eziteshini ze-6th, i-7th kanye ne-8th zisebenza ngenkathi yokukhwela okusemthethweni futhi zinikeza nokudla okufudumele (i-curry irayisi, i-ramen, isobho, iziphuzo njll). Qaphela amadwala avela esiteshini se-8th nangaphezulu. Kubalulekile ukuletha izinsiza zamanzi ezanele noma ukuthenga amanzi esiteshini sesihlanu, ngoba kunezindawo ezinomkhawulo wokuphinda usebenze, noma kungenzeka ukuthi uhlanze futhi uphuze amanzi emvula atholakala ngezinhloso zokugeza izandla ezindaweni zokuhlala ezintabeni.
Izinzuzo zalo mkhondo:
Bambalwa abantu, ngakho-ke ungahamba ngejubane lakho futhi ube nesikhala esengeziwe sokulala ezindaweni ezigcwele izintaba
Intaba ephezulu iyabonakala
Ungagijima wehle indlela embozwe ngotshani esuka esiteshini sesikhombisa.
Akukho ukukhwela idwala
Okubi ngale ndlela:
Ukuhamba kwezintaba okumbalwa (eyodwa ngakunye esiteshini i6th, 7th, kanye nesiteshi se8th)
Ngesikhathi sokufika komlotha kungenza izingubo nezicucu zingcole kakhulu, nezicathulo zingagcwaliswa ngomlotha uma ama-gaiters noma enye ingubo ingagqokwa.
Izinto zokuhamba eziya esiteshini sesihlanu zikhawulelwe- ibhasi lokugcina ukusuka esiteshini iJR Gotemba liya esiteshini i5th lisuka ngase5 pm.
Akukho mishini yokuthengisela etholakala kulo mzila ngemuva kwesiteshi sesihlanu.
Izintaba ezazinezintaba zigcwele kuzo zonke iziteshi eziku-Kawaguchiko trail, kanye nengqungquthela uqobo, ithengisa amagiya ayisisekelo okukhuphuka (izinti, amalambu, amalambu emvula, ngisho namakesi ka-oxygen), iziphuzo kanye noswidi. Uma abasebenzi bakho abenyukayo baba umlingani omthandayo, ungakhokha ukuthi kufakwe uphawu olusemthethweni kulo olufaka uphawu lokufika kwakho kuzo zonke iziteshi, wenze isikhumbuzo esihle (inqobo nje uma ungazi ukuthi uzokufaka nawe).
Ama-Postcards- Engqungqutheleni, ungasetha amakhadi akho okuposa ngaphandle kokuphawula ngeposi elivela eposini eliphakeme kakhulu Japan. Itholakala phakathi kweziteshi ze-10th zemizila yeGotemba neFujinomiya, futhi ivulekile ukusuka ku-6 AM kuye ku-2 PM ngezinsuku ze-42 kusuka ekuqaleni kukaJulayi kuya ngasekupheleni kuka-Agasti. (Izinsuku eziqondile zishintsha njalo ngonyaka; ku-2008, kwakunguJulayi 10 kuya ku-Agasti 20.) Eduzane nehhovisi leposi kunendawo encane yokucima ukoma lapho ungathenga khona izitifiketi ezinhle ezimiswe ngesitembu esisemthethweni ukumaka ukwenyuka kwakho. (Khumbula-ke, njengoba besho eNtabeni i-Everest, ukhuphuke intaba kuphela uma uyibuyisela phansi.) Amaphosikhadi nesibonakaliso esikhethekile siyatholakala naseKawaguchiko Fifth Station.
Uma ukhwela eMt. UFuji futhi wasinda yize (sibonga?) Zonke izexwayiso ze-apocalyptic lapha, ziphathise ukucwilisa emithonjeni esishisayo eHakone.